musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Sei COVID Inokanganisa France Kufamba uye Tourism mu2020
avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • France Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
France COVID kukanganisa
MuFrance, nyika yeindasitiri yeTravel uye Tourism yakapa 49.1 muzana pasi peGDP yenyika pakati pe2019 na2020 nekuda kwe COVID-19.
France yakarasikirwa ne1 mu11 mabasa kubvira pakatanga COVID-19.
Mu2019, mamirioni 334 emabasa munyika akabatsira kuFrance yekufambisa uye yekushanya indasitiri.
Mupiro weGDP munharaunda yekushanya muFrance wakakwira kubva pa8.5 muzana kusvika pa4.7 muzana kubva 2019 kusvika 2020.
Yevashanyi vepasi rose kukanganisa pamari kwakabva kubva pa60.4 bhiriyoni kuenda ku28.5 bhiriyoni, kurasikirwa kwe52.9 muzana kubva muna 2019 kusvika 2020. Vashanyi vepamba vanoshandisa mari kubva pamadhora 115.5 bhiriyoni kuenda pa58.0 bhiriyoni kana 49.8 muzana. Huwandu huchienzanisa mashandisirwo emumba hwaive huwandu hwe66 muzana muna2019 uye 67 muzana muna 2020. Mari yepasi rose yaive 34 muzana mu2019 uye 33 muzana mu2020.
Musika wekuzorora wekuzorora wakakwira kuratidza 3 muzana yakawanda yekuzorora vafambi yavanoshandisa muFrance.
Iyo yepamusoro 5 inopinda inosvika ku Furanzi muna 2020 vaiva:
- Germany: 16 muzana
- Belgium: 15 muzana
- United Kingdom: 13 muzana
- Switzerland: 9 muzana
- Italy: 8 muzana
Misika yepamusoro mishanu inobuda iyo vafambi veFrance vakaita ndeiyi:
- Nyika dzakabatana
Denda risati rasvika, Kufamba neKushanya (kusanganisira zvainanga, zvisina kunangana uye zvakakonzera) zvakapa 1 mu4 pamabasa ese matsva akagadzirwa pasirese, 10.6 muzana yemabasa ese (mamirioni 334), uye gumi nemana muzana muzana yeGDP yepasi rose (US $ 10.4 tiririyoni). Mari yevaenzi vepasi rese yaisvika US $ 9.2 trillion mu1.7 (2019 muzana yezvose zvakatengeswa kunze, 6.8 muzana yezvese zvepasi rese mabasa).
Tsvagiridzo iyi inoratidza zvakare kuti chikamu cheKufamba neKushanya chakarasikirwa neinosvika US $ 4.5 trillion kusvika US $ 4.7 trillion muna 2020, nemupiro kuGDP uchidonha nechikamu chinoshamisa che49.1 muzana kana ichienzaniswa ne2019; zvine hukama ne3.7 muzana GDP kuderera kwehupfumi hwepasi rose muna2020. Muna 2019, chikamu cheKufamba neKushanya chakapa 10.4 muzana kuGDP yepasi rose; mugove wakadzikira kusvika pa5.5 muzana muna2020 nekuda kwezvirambidzo zvinoramba zvichiitika pakufamba.